Cele Seven – Page2– Just another WordPress site
ပါရမီရွင္တစ္ေယာက္လို ခင္ပြန္းျပင္ဆင္ေပးတဲ့ မိတ္ကပ္ႏွင့္ဆံထုံးျပင္ေပးတဲ့အတိုင္း ပြဲႀကီးတက္ခဲ့ရလို႔ေပ်ာ္ေနရွာတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္အလွမယ္ ဟန္နီခ်ိဳ……
ပရိသတ်ကြီးရေ Mrs Universe 2019 ရဲ့ Winner ဆုရှင် ဟန်နီချို ကတော့ အိမ်ထောင်ရှင် အလှမယ်တစ်ယောက် အဖြစ် လူသိများ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နီချိုဟာ အိမ်ထောင်ရှင် အလှမယ်တစ်ယောက် အဖြစ်သာမက သာယာတဲ့ …
June 29, 2022 By LY C Celebrity
တစ္ေယာက္တည္း အပ်ိဳႀကီးဘဝနဲ႔ဘဲ ျဖတ္သန္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္လို႔ ေျပာျပလာတဲ့ နိုင္းနိုင္းရဲ့ ညီမေလး သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖူးဖူး….
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် နိုင်းနိုင်းရဲ့ ညီမလေး ဖူးဖူး ကတော့ ဗီဒီယိုတစ်ခေတ်မှာလည်း ဇာတ်ကားတွေရိုတ်ကူးခဲ့ပြီး အားပေးမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ဖူးဖူးက အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ဝေးကွာနေပြီး စီးပွားရေးကိုဘဲ လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှတော့ သရုပ်ဆောင်ဖူးဖူးက အိမ်ထောင်ပြုမယ် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပြတ်သွားလို့ တစ်ယောက်တည်း …
သူ႔ရဲ့ ေၾကာင္ကေလး တစ္ခုခုျဖစ္မွာစိုးလို႔ တညလုံးေစာင့္ၾကည့္ေနတာ မနက္က်ထြက္ခြာသြားလို႔အရမ္းဝမ္းနည္းေနရွာတဲ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ့ ဗီဒီယို….
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ကတော့ အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်း တောက်အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်က မြန်မာနိုင်ငံ မှာသာမကဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ပါရေပန်းစားတဲ့ မင်းသား တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ …
ထိုင္းငံက အလႉရွင္ေတြလႉတဲ့ေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀) ကို ကိုဂ်မ္းေတာေလးတို႔ သားအဖဆီကိုယ္တိုင္ သြားေပးခဲ့တဲ့ စည္သူပလပ္ကၽြတ္ ႐ုပ္သံဖိုင္….
ပရိသတ်ကြီးရေ အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ် သရက်ကင်သည်လေး ဂျမ်းတော ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေ ရုန်းကန်နေသူဖြစ်ပြီး စကားကို အမြန်ပြောရင်းကနေ လူမှုကွန်ယက်ပေါ် မှာ နာမည်ကြီးလာခဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမ်းတောလေးက …
စိန္ေတြ ေတာ္ေတာ္ျပဳတ္ သြားခဲ့တဲ့အျပင္ဘဏ္ေႂကြးဆပ္ဖို႔ အတြက္ Live Sales ေတြ ႀကိဳးစားေရာင္းျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့ လွမ်ိဳးသဥၨာႏြယ္ ဗီဒီယို….
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ် ကတော့ ဝါရင့် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်လျောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုတ်ကူးခဲ့ပြီး အားလုံးရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ် က ပိုးထည်ဆိုင်ကြီး ဖွင့်ထားပြီး live sale တွေလည်း …
ကြယ္လြန္သြားတဲ့ အရင္ကခင္ပြန္းေဟာင္း ဓါတ္ပုံေလးကိုင္ၿပီး သီခ်င္းေလးဆိုကငိုေႂကြးေနရွာတဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္ရဲ့ဗီဒီယို….
ပရိသတ်ကြီးရေ ဥက္ကာမင်းမောင်ဆိုတာ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်နေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ထိပ်တန်း cele တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူကတော့အမေရိကမှာနေထိုင်နေတာပါ။ လူမှုကွန်ရက် ကနေတော့ပရိသတ်တွေ အတွက် ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ချစ်နေရတာပါ။ …
June 28, 2022 By LY C Celebrity
ဦးေလးျဖစ္သူေရမြန္ရဲ့ပုံေလးကို ဆြဲၿပီး အလြမ္းေျဖေန တဲ့ ပိုးပိုးေလးကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ား…
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေ လေးစားချင်ခင်ရတဲ့ အဆိုတော် ရေမွန် ကတော့ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ တစ်နှစ် တိတိရှိခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အောက်မေ့သတိရခြင်းကို ခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေမွန့် ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ကတော့ …
အတုပ္ၾကမ္းတဲ့ ပ်ားပိတုန္းေကာင္ကို မေၾကာက္မရြံ့ လိုက္ဖမ္းေနတဲ့ ပိုင္တံခြန္ ရဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ ဗီဒီယိုေလး……
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူ့မင်းသားလေး ပိုင်တံခွန်ဟာ ဆိုရင် ရုပ်ရည် ချောမောသလောက် အနုပညာစွမ်းရည် အပြည့်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားလွန်းတဲ့ အရပ်နဲ့ ချောမောလွန်း လှတဲ့ ပိုင်တံခွန်ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက အနုပညာလှုပ်ရှားမှု လမ်းကြောင်းထက်ဆီကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ …
အရြယ္ နဲ႔မလိုက္ေအာင္ အားကိုေနရၿပီဆိုတဲ့ ေမေမ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ့ အသည္းေက်ာ္ အားႀကီး ရဲ့ ဗီဒီယို……
ပရိသတ်ကြီးရေ အာကြီးက တော့ ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ရင်သွေးလေးများ ဂေဟာမှာ ခေါ်ယူ မွေးစားစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ထဲက အလည်ဆုံးအတတ်ဆုံးကလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာကြီးရဲ့ အရွယ် နဲ့ မလိုက်အောင် လည်ပြီး တတ်လွန်း လှတာကြောင့် …
ဖခင္ႀကီးနဲ႔အတူ သူမရဲ့ေမြးေန႔ေလးကို အိမ္မွာဘဲရိုးရိုးေလး ျဖတ္သန္းလိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေဟကို ရဲ့ဗီဒီယို…
ပရိသတ်ကြီးရေ မိုးဟေကို ဆိုတာနဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်​ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ တစ်ချိန်က ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ နဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာလောကမှာ လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှုတွေ နဲ့ ယနေ့တိုင်ရပ်တည်နေတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ နားပြီးပရိသတ်တွေ နဲ့ …